Ku samee bacriminta dabiiciga ah gurigaaga
Marka bacriminta dabiiciga ah ee guriga lagu sameeyo, isku-darka qashinka dabiiciga ah waa lagama maarmaan.
Isku-darka isku-darka ayaa ah hab wax ku ool ah oo dhaqaale oo qashinka xoolaha looga takhalusi karo
Waxaa jira saddex nooc oo noocyo taallo ah: toosan, god-biyood, iyo god
Ku habboon heerkulka sare, roobka, huurka badan, meelaha miiska biyuhu sareeyo. Xulo meel qalalan, furan, una dhow ilaha biyaha. Meelaha isdabajoogga ee dhererka 2m oo dherer ah 1.5-2m dherer ayaa lagu maamulayaa iyadoo loo eegayo tirada alaabta ceeriin ah. Xooji carrada kahor intaadan isdabarin ku dabool lakab walboo walxo ah lakab doogga ama cowska si aad uquujiso dheecaanka dheecaanka .. Lakab kastaa waa dhumucdiisuna 15-24cm. Kudar xaddiga saxda ah ee biyaha, nuuradda, dhoobada, saxarada, iwm. Inta udhaxeysa lakabyada si aad u yarayso uumi-baxa iyo isbeddelka ammonia. Ka dib hal bil oo nafaqeynta ah, kaxee qashin-qubka socod si aad u rogto nafaqeynta oo aad si joogto ah ugu rogtid raso ilaa ay aakhirka wax ka burburayaan. Qiyaasta saxda ah ee biyaha ayaa loo baahan yahay iyadoo kuxiran qoyaanka ama qalalka carrada. Qiyaasta isku-dhafka ayaa kala duwan xilliyada, badanaa 3-4 bilood xagaaga 2 bilood iyo 3-4 bilood xilliga qaboobaha. .
Nooca godka badhkiisa
Waxaa badanaa la isticmaalaa horraanta gu'ga iyo jiilaalka. Xullo meel hoose oo jiifta si aad uqodato god dhererkiisu yahay 2-3-fuudh 5-6 fuudh dherer iyo 8-12 fuudh dherer Hawo-mareennada iskutallaabta waa in lagu dhejiyaa salka iyo darbiyada godka. Ku dar 1000 kg oo caws qalalan dusheeda nafaqeynta oo ku xir ciid. Toddobaad ka dib markii la bacrimiyey, heerkulku wuu kordhayaa. Adoo isticmaalaya qashin qub, u rog roomaha halsanka si siman 5-7 maalmood ka dib qaboojinta, sii wadna nafaqeynta illaa inta alaabta ceyriinka ah ay gebi ahaanba kala daato.
Guud ahaan 2 mitir oo qoto dheer, sidoo kale loo yaqaan nooca dhulka hoostiisa. Habka isku dhejinta ayaa la mid ah habka godka nuska. Isticmaal qashin-qub laba-libaaxle ah inta lagu jiro kala-baxa si aad maaddada uga dhigto mid aad ula xiriiri kara hawada.
Bacriminta anaerobic heerkulka sare.
Bacriminta heerkulka sare waa habka ugu weyn ee aan waxyeelada lahayn ee lagu tuuro qashinka dabiiciga ah, gaar ahaan qashinka aadanaha. Maaddooyinka waxyeellada leh sida bakteeriyada, ukunta iyo miraha cawska ku jira caws iyo saxar ayaa la dilaa ka dib daaweynta heerkulka sare. Bacriminta anaerobic heerkulka sare waa 2 dariiqo, nooca taallo fidsan iyo nooca nus-godka. Farsamaynta isku-dhafka waxay la mid tahay tan compost-ka caadiga ah. Si kastaba ha noqotee, si loo dedejiyo burburka cawska, compost heerkulka sare waa inuu ku daraa bakteeriyada kuleylka cellulose heerkulka sare, oo samee qalabka kululaynta. Tallaabooyinka ka hortagga qaboojiyaha waa in lagu qaadaa meelaha qabow. Iskudhinta kuleylka heerkulka sare wuxuu maraa dhowr marxaladood: kuleylka-qaboojinta-kala-daadashada. Maaddooyinka waxyeellada leh waxaa lagu burburin doonaa heerkul sarreeya. Way fiicnaan laheyd haddii aad leedahay sibidh gaar ah ama aag lagu nafaqeeyo leben.
Waxyaabaha ugu muhiimsan: nitrogen.
Qaybaha hoose: fosfooraska, potassium, birta.
Badanaa waxaa loo isticmaalaa bacriminta nitrogen, feejignaan hoose, ma fududa in waxyeelo loo geysto nidaamka asalka. Kuma haboona isticmaalka culus inta lagu jiro muddada natiijada ubax. Sababtoo ah ubaxyada iyo miraha waxay u baahan yihiin fosfooras badan, potassium, baaruud.
Qalabka ceeriin ee bacriminta dabiiciga ah ee guryaha lagu sameeyo.
Waxaan kugula talineynaa inaad dooratid qeybaha soo socda sida alaabta ceyriinka ee bacriminta dabiiciga ah ee guriga lagu sameeyo.
1. Ku beeri alaabta ceyriinka ah
Magaalooyin badan oo waaweyn oo ku yaal Mareykanka, dowladda ayaa lacag siisa shaqaalaha ururiya caleemaha caleemaha. Markuu compostka bislaado, waxaa looga iibiyaa beeraleyda qiimo jaban. Haddii aysan ku jirin meelaha kuleylaha ah, waxaa ugu wanaagsan in lakab kasta oo caleemo qoyan ah laga sameeyo wax ka yar 5-10 cm oo dhumuc leh, caleemo qoyan oo dusha sare leh oo dhererkeedu yahay 40 cm. Inta udhaxeysa lakabyada kala duwan ee caleemaha caleemaha waxaa loo baahan yahay in lagu daboolo waxyaabo badan sida carrada, taas oo ~ qaadan karta ugu yaraan 6 illaa 12 bilood si ay u qudhmaan. Ciidda ha ahaato mid qoyan, laakiin ha ku badin biyo si aad uga hortagto in nafaqada ay lumiso.
Haddii miraha qudhmuun, iniinyaha, diirka, ubaxa, iwm la isticmaalo, suusku wuu qaadan karaa waxyar. Fosfooraska, potassium iyo baaruudda ayaa ka sarreeya.
Keegga digirta, digirta bean, iwm
Waxay kuxirantahay xaalada sii deynaysa, isku beeliddu waxay qaadataa ugu yaraan 3 ilaa 6 bilood inay bislaato. Habka ugu fiican ee loo dardargelin karo bislaanshaha waa in lagu daro jeermis. Mid ka mid ah waxyaabaha lagu cabiro nafaqeynta ayaa ah inaysan jirin wax ur ah haba yaraatee. Fosfooraska, potassium iyo baaruudda ay ka kooban tahay ayaa ka sarreeysa tan compost qalalan, laakiin ka hooseysa tan khudradda compost. Compost waxaa si toos ah looga sameeyaa waxyaabaha soy ama soy. Sooyaashu waxay ku qaataan waqti dheeri ah inay ku nafaqeeyaan maadama ay ku jiraan dufan badan. Saaxiibbada sameeya dufanka dabiiciga ah, weli way urayaan sanad ama sannado ka dib. Sidaa darteed, waxaan kugula talineynaa in soybaanku aad loo kariyo, la kiciyo, ka dibna la qooyo. Waxay si weyn u yareyn kartaa waqtiga uurka.
2. Saxarada xoolaha
Saxarada dhirta geedaha sida idaha iyo lo'da ayaa ku habboon halsano iyo soo saarista bacriminta noolaha. Intaa waxaa dheer, digada digaagga iyo fosfooraska digada digada qoolleydu waa sarreysaa, sidoo kale waa xulasho wanaagsan.
Xusuusin: Saxarada xayawaanka ee la maareeyo oo dib loo warshadeeyo warshad heer sare ah ayaa loo isticmaali karaa inay tahay walxo cayriin oo loogu talagalay bacriminta dabiiciga ah. Si kastaba ha noqotee, maqnaanshaha qalab wax soo saar oo horumarsan oo guriga dhexdiisa ah, uma doodi karno adeegsiga saxarada aadanaha sida alaabta ceeriin si loo sameeyo bacriminta dabiiciga ah.
3. Carrada Bacriminta Dabiiciga ah ee Cunnada
Jinsi ahaaneed: Waa la tirin karaa, laakiin waa isku-dheellitirnaan sare. Waa in loo adeegsadaa sida bacriminta aasaasiga ah, keligaa maahan.
Xidid irbad geedka
Marka dhumucda dhiigu ka weyn tahay 10-20cm, cirbadda geedka waxaa loo isticmaali karaa inay tahay walxo cayriin oo loogu talagalay bacriminta dabiiciga ah. Hase yeeshe, ma isticmaali kartid
Geedaha leh maadada yar ee maadada, sida hoos u dhaca firka baalka, waxay leeyihiin saameyn wanaagsan.
Bacriminta ayaa ka waxtar badan. Si kastaba ha noqotee, looma isticmaali karo si toos ah waxaana lagu qasi karaa waxyaabo kale oo dabiici ah.
Sababta ay tahay in maadada dabiicigu ay gebi ahaanba daaqo.
Kala daadsanaanta maaddada dabiicigu waxay keentaa laba isbeddel oo waaweyn iyada oo loo marayo waxqabadka microbial: kala-daadashada walxaha dabiiciga waxay kordhisaa nafaqooyinka wax ku oolka ah ee bacriminta. Dhinaca kale, arrinta dabiiciga ah ee alaabta ceyriinka ah ayaa laga jilciyaa mid adag oo jilicsan, qaabdhismeedka ayaa loo beddelay mid aan sinnayn oo loo siman yahay. Markay socoto nafaqaynta, waxay dishaa iniinyaha, bakteeriyada, iyo ukunta badankeeda. Sidaa darteed, waxay aad ula jaanqaadaysaa shuruudaha wax soo saarka beeraha.